ကျောင်းတော် အမှတ်တရ ပေါက်ကရ ဒဿန (ပေါက်ကရ၀င်ရေးသွားလည်း ရတယ် …. :D) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျောင်းတော် အမှတ်တရ ပေါက်ကရ ဒဿန (ပေါက်ကရ၀င်ရေးသွားလည်း ရတယ် …. :D)
ကျောင်းတော် အမှတ်တရ ပေါက်ကရ ဒဿန (ပေါက်ကရ၀င်ရေးသွားလည်း ရတယ် …. :D)
Posted by King on Jun 24, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 30 comments
အခုတစ်လော မိုးလေးက အေး နဲ့ …. စာအုပ်ပုံတွေကို ဟိုလှန်ဒီလှန်လုပ်ရင်း စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ နောက်ဖက်မှာ ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ပေါက်ကရတွေ လျှောက်ရေးတာတွေကို ဖတ်ရင်း အတိတ်က ကျောင်းတော်ထဲကို အတွေးတွေ စီးဆင်း သွားခဲ့ပါတယ် ……. ကျောင်းဆိုတဲ့ အတိုင်း စာကိုသိပ်စိတ်မ၀င်စားတဲ့ ကျွန်တော်က ဆရာ/မနဲ့လေ ဝေးလေ ပိုကောင်းလေ ဆိုပြီး အတန်းရဲ့ နောက်ဆုံးမှာပဲ ထိုင်လေ့ရှိတယ်ပေ့ါဗျာ (ကျွန်တော့်နောက်မှ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ မြန်မာနိုင်ငံတော် မြေပုံတွေ ကိုကပ်ထားတဲ့ ကျောက်သင်ပုန်း …. အဲဒီနောက်မှာတော့ ကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ ခုံအပိုင်းအစတွေပဲ ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ) …… အော် ပြောရအုန်းမယ်ဗျ ကျွန်တော်တို့ စာသင်ရတဲ့အခန်းက လူ(၂၀၀)ယောက်လောက် စာသင်လို့ရအောင် ကျယ်တဲ့ အခန်းဗျ …. ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသူ/သားတွေက အားလုံးပေါင်း လူ (၁၆၀)ပဲ ရှိတယ်… ကျောင်းသူ/သားတွေ လူစုံတဲ့ နေ့ကတော့ စာမေးပွဲ ဖြေရတဲ့နေပါပဲ … :D …ကျန်တဲ့ရက်တွေက အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး မတက်ကြဘူးပေါ့ဗျာ (အိမ်က ပိုက်ဆံ လွှဲပေးမှာမိုလို့၊ အဒေါ်ဆီ ပိုက်ဆံသွားချည်းမလို့၊ နယ်က ညီလေး/ညီမလေးတွေကို သွားကြိုမလို့၊ ခေါင်းမူးလို့ …. ဘာလို့ ညာလို့ အစရှိသဖြင့်ပေါ့ဗျာ … တစ်ချို့ ကြတော့လည်း ဘဲဘဲနဲ့ ချိန်းတွေ့ မှာမိုလို့ ကျောင်းပျက်တယ်ပေါ့ဗျာ ) ဘဲဘဲနဲ့ ဆိုပြီး ပြောလို့ မိန်းကလေးတွေကိုပဲ အပျက်များတယ်လို့ ပြောတာက … အကြောင်းရှိပါတယ်ဗျ .. လူ(၁၆၀)မှာ အမျိုးသားက (၁၇)ယောက်ပဲ ရှိတော့ မိန်းကလေးတွေပဲ ကျောင်းပျက်တာ များတာပေါ့ဗျာ …. ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတွေက ကျောင်းမှာတင် မိန်းကလေးတွေများတော့ အပြင်မှာထွက်ပြီး ရှာစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ …. ဒါတောင် ကျွန်တော်တို့အတန်းပဲ ရှိသေးတယ်ဗျ… ကျွန်တော်က နောက်ဆုံးတန်းမှာ ထိုင်ပြီး စာအုပ်ထဲမှာ ပေါက်ကရရေးကြတယ်ဆိုတော့ ကျန်တဲ့သူတွေက ယောင်္ကျားလေးလို့တော့ မထင်လိုက်ကြပါနဲ့ … ကျွန်တော်ကလွဲပြီး ကျွန်တော့်စာအုပ်ထဲမှာ မိန်းကလေးတွေပဲ ရေးကြတာ (မှတ်ချက်၊ ကြွားတယ်လို့တော့ မထင်စေချင်ပါ.. အမှန်ကလည်း …. ” ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ စကားလုံးကို ငှားပြီးပြောလိုက်ပါတယ် ” ..ကြုံတုန်းကြွားရတာ သိပ်တော့မလွယ်ဘူးဗျ …. ဟီးးးးး ) ကဲ ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ … အဲ …. ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့ လိုရင်းကို မရောက်တော့ဘူး … ကဲ ရေးခဲ့တဲ့ အမြင်လေးတွေကို အောက်မှာ ဆက်ရေးပေးလိုက်ပါတယ် … သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောတယ် .. နင်တို့တွေ Love ကို ဘယ်လိုခံစားရလဲ ဆိုတာပြောပြပေးပါတဲ့ ….
အဲဒီတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကရေး ပေးလိုက်တယ် – …… :D
Love (အချစ်) = တစ်ခါတစ်ရံမှာ အရမ်းကိုကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ အရမ်းကို ပူလောင်ပါတယ်. သူက ခံစားမှု အမျိုးမျိုးကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့ … ….. …………
နောက်တစ်ယောက်ကလည်း ရေးလိုက်သေးတယ်ဗျ ….. :D
Love = ကိုယ်ကပေးပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ပြန်ရချင်မှ ရတတ်ပါတယ် .……..
မေးခွန်းမေးခဲ့သူက … သူလည်း ရေးပေးလိုက်သေးတယ် …. :D
အားလုံးအချစ်အကြောင်းကို ခံစားပြီးနားလည်သလို ပြောတတ်ကြတယ်နော်တဲ့ …
သူကတော့ အချစ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိလိုက်ခင်မှာပဲ အလွယ်တကူ ပြိုပျက်သွားတာပါ .... ဆိုပြီး ရေးပေးတယ်
ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ငါတို့ ရေးတာသာ နင်က လိုက်ဖက်နေတယ် နင်ကျတော့ မရေးဘူးဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကိုလည်း ရေးခိုင်းတယ်ဗျ …. ကျွန်တော်လည်း ဘယ်ရမလဲ အေး ငါလည်း ၀င်ဖောလိုက်အုန်းမယ်ဆိုပြီး ရေးခဲ့မိတယ် …..
LOVE = အချစ်မှာ ပူလောင်ခြင်း၊ အေးချမ်းခြင်းတွေမရှိပါဘူး …. သူ့ကိုလက်ခံတဲ့လူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ခံစားမှု အပေါ်မှာ လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲသွားတာပါ …. တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ အချစ်ပါပဲကွယ် .…. :D
ကဲ ရွာထဲက ရွာသူ/သားတွေလည်း အချစ်အကြောင်း နည်းနည်း ၀င်ဆွေးနွေးပေးကြပါအုန်း …. နောက်ထပ် ပေါက်ကရ ဆွေးနွေးထားတဲ့ အကြောင်းလည်း ရှိသေးတယ်ဗျ … အဲဒါက အိမ်ထောင်ဖက် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပေါ့ …. ဆွေးနွေးချင်တဲ့သူရှိရင် ထပ်တင်ပေးလိုက်အုန်းမယ်ဗျ …. အခုတော့ ဒီတစ်ခုကိုပဲ အရင်ဆွေးနွေးရင် ပေါက်ကရပြောကြည့်ကြမယ်လေဗျာ ….. :D
ဆယ်တန်းအောင်တော့ မြစ်ကြီးနားကောလိပ်မှာ တက်ရတယ်။ ကချင်မလေးကို ရီးစားစကားပြောကြည့်
တယ် … သူပြန်ပြောလိုက်ပုံက ကျနော်တောင်ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ဖြစ်သွားရတယ်ဗျ။
ရှင်ကျမကိုချစ်တယ်ဆိုတာ ကြီးကို ကျမသိပါတယ်တဲ့ …. ကောင်းရောဗျာ …။
ကျွန်တော်လည်းသိတယ် ကိုဖက် ချစ်တယ်ဆိုတာကြီးကို
ဟားးးးးး ဟားးးးးးးးးး :D
ကိုဖက် ဒီတစ်ပတ်ရော ကော်ဖီတိုက်အုန်းမှလားဗျ
နေရောကောင်းရဲ့လား …… :D
သူများတွေကပြောတယ် အချစ်ဆိုတာ စွန့်လွှတ်ခြင်းတဲ့။
တချို့ကလည်း အချစ်က ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့။
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ အချစ်ပါပဲ :D
သားအဖ ဆိုတာ သိသာတယ်နော်
အဖေပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်ပြောတယ် ….. :D
” ကျွန်တော်လည်း ဘယ်ရမလဲ အေး ငါလည်း ၀င်ဖောလိုက်အုန်းမယ်ဆိုပြီး ရေးခဲ့မိတယ် …..
LOVE = အချစ်မှာ ပူလောင်ခြင်း၊ အေးချမ်းခြင်းတွေမရှိပါဘူး …. သူ့ကိုလက်ခံတဲ့လူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ခံစားမှု အပေါ်မှာ လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲသွားတာပါ …. တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ အချစ်ပါပဲကွယ် .…. :D ”
အချစ်ဆိုတာ ချစ်နေဖို့ပဲလိုတယ် သူဘက်က ချစ်တာ မချစ်တာထက် ကိုယ့်ဘက်က ချစ်နေရရရင်လဲ ချစ်တာပဲမို့ နွယ်ပင်ကတော့ အချစ်မှာ ချစ်တက်ဖို့ပဲ လိုတယ်လို့တွေးတယ်
အကောင်းဘက်ရော အဆုံးဘက်ရော အဆုံးစွန်ဖြစ်သွားတဲ့အထိ အားကြီးတယ်…..
အချစ် ဆိုတာကို တိတိကျကျ မပြောတတ်ပါဘူး … သိလည်း မသိသေးပါဘူး ။
ဒါပေမဲ့ ဟိုတနေ့က ဖတ်မိလိုက်တဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ တော့ Platonic Love ဆို တာ က တော့ တော်တော် အေးချမ်းတယ် လို့ဆိုထားပါတယ် ။
Platonic Love = ပိုင်ဆိုင်ရ ၊ ပေါင်း ဆုံ ရမှ မဟုတ်ဘဲ ဖြူဖြူ စင်စင် မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်နိုင်တာ လို့ လည်း အဓိပ္ပါယ် ဖွင့် ထားပါတယ် ။
(ပေါက်ကရ ၀င်ရေးသွားလဲရတယ် ဆိုလို့နော်)
“အိမ်” လို့ ထင်အောင် လှည့်စားတတ်တဲ့…
ေ-ွး မသား မျက်လှည့်ဆရာကြီးပဲ !!!!!
Ko Ko Aung တော့ ထောင်ထဲ ရောက်နေလို့လား ….
အင်း … အချစ်ဆိုတာမျက်မမြင်တွေ ဆင်စမ်းသလိုမှန်း
မီးခြစ်ကိုလေ ….. :D
တခြားဟာဆို တမျိုးတွေးရမှာလား :D
အဲတော့ လိုဘီ ဆိုတော့ လိုအပ်နေပြီလို့ဘာသာပြန်ရင်ရပါတယ်။
ဘာလိုသလဲတော့ မသိဘူးနော် လိုတာကတော့ လိုတာဘဲ။
ကျောင်းတက်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ ဆီက ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ကြားခဲ့ဖူးတယ် … ။
LOVE ဆိုတာ လိုင်စင်အော့်ဖဗချိုင်နာအန်းထရန့်စ်တဲ့ လေ… ။
အချစ်ဆိုတာ ….. အချစ်ဆိုတာာ……. ။။။။ ….
Zzzz Zzzzz ခေါခရူးးးးးး (အချစ်အကြောင်းစဉ်းစားရင် အိပ်ပျော်သွားပါကြောင်း )
အချို့ကတော့ အချစ်ဆိုတာ ….လှပတဲ့စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်ကလေးတခုပါတဲ့။(ရည်းစားထားခါစ)
အချို့ကတော့ အချစ်ဆိုတာ….စွန့်လွတ်ခြင်း အနစ်နာခံခြင်း ပေးဆပ်ခြင်းတဲ့။ (သဘောထားကြီးသူ)
အချို့ကတော့ အချစ်ဆိုတာ….ပူလောင်တယ်တဲ့။ (ရည်းစားနှင့်ကွဲသူ)
အချို့ကတော့ အချစ်ဆိုတာ….အေးမြတယ်တဲ့။ (ရည်းစားနှင့် အဆင်ပြေသူ)
အချို့ကတော့ ….အချစ်နဲ့စစ်မှာ တရားမျှတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။(ရည်စားလုဖက်တွေ့သူ)
cat love ကိုတော့ ကြောင်ခြစ်လို့ ဘာသာပြန်နိုင်တယ်။ သိချင်ရင် ခြစ်ပြမယ်….
ငယ်ငယ်တုန်းကသိတဲ့ကြောင်ခြစ်က ကြွက်ဖမ်းဖို့ လက်သဲသွေးတာ။ MG ကကြောင်ခြစ်ကတော့ ogre ဖမ်းဖို့လက်သဲသွေးတာ။
အချစ်ဦး ချစ်သူ နဲ့ ညားသွားကြတဲ့ သူ တွေ အတွက်တော့ အချစ်ဟာ ပြောစရာ သိပ်မရှိပါဘူး ။
အချစ်ဦး ချစ်သူ နဲ့ အကြောင်းကြောင်း ကြောင့် လမ်းခွဲ သွားတဲ့သူတွေ ။ လမ်းခွဲ ခံ ခဲ့ ရတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ အချစ်ဟာ ဇါတ်သိမ်း မလှ တဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ။
အချစ်သည် ဆပ်ပြာခဲ့နှင့် တူသည်။ ကိုယ်လုံးကိုတိုက်လျင် ကိုယ်လုံးမွေးသလို၊ ခြေထောက်ကိုတိုက်လျင် ခြေထောက်မွေးသည်။ (ဒါကပမာ တင်ပြတာပါ။) အညစ်အကြေးများကိုလျော်ဖွတ်လို့ရသလို ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ညစ်ညမ်းမှုကိုလည်းလျော်ဖွတ်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပါက..အသုံးပြုနိုင်သလို မကိုင်တတ်လျင်လည်းချော်ထွက်ခါ ကိုယ့်လက်ထဲမှာလွတ်မြောက်သွားနိုင်သည်။
ပြောပြအုန်းလေဗျာ …. :D
သိပ် မမေးနဲ့ မှား ဖြေမိရင် သူ့ မိန်းမ လိုက်လာပြီး ကင်းကို ရိုက်လိမ့်မယ်။
ဖယောင်းတိုင် မီး လိုဘဲတဲ့
အချိန်ကြာလာရင် လောင်ပြီး ကုန်သွားတတ်တယ်
ဒီတော့နောက် တတိုင်ရှာပြီး ထပ်ထွန်း တတ်ကြတယ်။
ဖယောင်းတိုင် ဘယ်နှစ်တိုင် ကုန်ပြီလဲဗျ
ကလေးတွေကို ဗဟုသုတ မျှပေးပါအုန်း …
ငါးဖယ်ခြစ်.. စားလို့ ကောင်းတယ်။
ကြော် မလား သုတ် မလား ဟင်းချက် စားမလား
(လူငယ် ရင်ခုန် တတ်ခါစ အချစ်ဆိုတာ)
ရေခဲခြစ်.. ရင်ကို အေးပြီး ချိုသွားစေတယ်။
ကြီးကြီးငယ်ငယ် အချစ်နဲ့ တွေ့တဲ့ အခါ နှလုံးသားတွေ အေးချမ်းပြီး အချစ်ဆိုတာ ချိုမြိန်တယ်လို့ ခံစားမှု
အုန်းခြစ်.. အုန်းသီး အသားနဲ့ အခွံ ကပ်နေတဲ့ ဆက်စပ်မှု ကို တစစီ ခွဲထုတ်တဲ့ အရာ
အချစ်ဆိုတာ ခွဲခွာမှု နဲ့ ကြုံရတဲ့ အခါ အုန်းသီး အသားနဲ့ အခွံ တစီ ခွဲထုတ် သလိုပဲ ရင်ထဲက နှလုံးသားတွေ တစစီ ကြေမွ ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှု ခံစားရချိန်။
အချစ်ရဲ့တန်ဘိုးကို ဆေးလိပ်တိုရေစိုတဲ့ အခါမှာပိုသိလိုက်ရပြီ……….